अाँसी र घन, फुल्टिन र प्यालामा भोट हालौं - हाम्रो कांग्रेसलाई सिटामोल खुवाउँ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतवार, बैशाख ११, २०७९ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसकाहर्ले हाम्रो अाँसी र मार्तोल खोजेर भोट हाल्ला जस्तो छैन । `बुट्टो चिन्ह खोजेर छाप ठोक्ने, भट्टी जाने रक्सी धोक्ने´ भन्दै कांग्रेसीहरू उफ्रनु थालेको छ । यही पारा हो भने भरतपुरमा नानी छोरीले बल्ड्याङ खान्छिन होला ! हाम्रो र माधवजीको खास जनसमर्थन र कार्जेकर्ता छैन । भरतपुर चिप्लियो भने हाम्रो एक मात्र अध्यक्ष काम्रेड प्रचन्नको राजनीति जीवन सकिन्छ कि क्याहो ? पोखरामा उस्तै बबाल गरिराको छ । पूर्वको संखुवासभा जिल्लामा कांग्रेसले हामीहर्लाई टुहुरो बनायो । एक्लै चुनाप लड्ने भयो । यता हाम्रो तल धनगढीमा सप्पै पदमा एक्लै लड्छौ भनेर कांग्रेसीहरू दिउसै बटारिएर हिडेको छ। यस्तो पनि काहि गठबन्धन हुन्छ ! पोखराका कांग्रेस `कम्निस्टेलाई भोट हालिदैन´ भन्दै अाफ्नै नेता विरुध्द मुर्दावाद भन्दैछन् । पोखरा न हेटौडा माधव नेपालको पत्तासाफ बनाउने भए । हाम्रो माअोवादीको पनि यही नै अन्तिम चुनाउ हुन्छ जस्तो छ । अर्को पटक हाम्रो महान काम्रेड प्रचन्नको पार्टी रहदैन बरै !
नमस्कार है विध्वंसे काका ! अब तिमी पनि कांग्रेसको झन्डा बोकेर `भोट केमा रुखमा´भन्दै मैसंग हिड्नु पर्ने भयो । यो गाउँपालिका हाम्रो नेपाली कांग्रेसको भागमा पर्यो । मलाई अध्यक्षको उमेदवार बनायो । प्रचन्न र माधवको पार्टीलाई एकुन्टा पानी सदस्य देको छ । ३ र ५ नं. वडामा मैले दया गरेर एक एकवटा पानी सदस्य देको । के गर्छौ त तिमारूसँग न जनता न कार्जेकर्ता बुँङ्गो भै हाल्यौ ।
खसालेर नबोल भिरघरे ! तेरो कांग्रेसको झन्डा बोकेर `हाम्रो कांग्रेसलाई भोट देउ´ भनेर गाउँ चाहार्दै हिड्दिन । त्यो दुइटा पानी सदस्य पनि तैं लैजा । तेरो दया चाहिन्न । म पनि माअोवादी केन्द्रको यो जिल्लाको नेता हुँ । हेपेर नबोल । अहिले पो हाम्रा सप्पै कार्जेकर्ता अोलीको एमालेतिर गए । जनता पनि उस्तै रान ! २०६४ सालमा हाम्रो पछि पछि लाग्नेहरू अहिले `एमाले जिन्दावाद, भोट केमा सूर्यमा´ भन्दै हिडेका छन् । यो गाउँको कुरा छोड । बरु भन उता भरतपुर र पोखरातिर के हुदै छ अरे !
के हुन्छ ! हुनु नै के छर ! हाम्रो त्यहाँको स्थानीय कांग्रेसले हँसिया हथौडा र कलममा भोट नहाल्ने भयो । जुन पार्टीको पाँच सय भोट अाउदैन उसैलाई महानगरको मेयर दिएपछि कांग्रेसीले भोट किन हाल्छ ? अाफ्नो ५० हजार मत पाँचवाला कम्युनिष्टलाई हालेर जिताउने ठेक्का कांग्रेसले लिएको छैन भनेर स्थानीय नेताले भनीसके । भरतपुर र पोखरा एमालेले सजिलै लान्छ ।
होनी भिरघरे दाइ ! अब हाम्रो पार्टी एमालेले भरसक छ वटै नभए पनि पाँचवटा महानगर्पालिका सजिलै जित्छ । ११ वटा उपमहानगर पालिका मध्य १० वटामा एमालेले अाफ्नो झन्डा फहराउछ । एमाले प्रतिको जनअाकर्षणले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
वाइयात कुरो गर्छ यो सण्डे पनि । एक्लो एमालेले कसरी जित्छ ? हामी पानदल मिल्दा त अात्तिएर बरबराउदै छौ । एमालेलाई जसरी पनि समाप्त पार्ने भनेर हाम्रो प्रचन्न काम्रेडले नै घोषना गरिसके । खै तैले कुरा बुझेको ? अोलीको पार्टीले स्थानीय निकायमा एक सिट पनि जित्तैन भनेर माधव र झलनाथलेसमेत भनीसके । हिसाब किताब गर्दाखेरी माअोवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, माधवको पार्टी तेस्रो मधेसवादी दलहरू चौथो र पाँचौँ साथै राप्रपा छैटौँ बन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
तिमी अौषधी खाउ बुढा । तिम्रो दिमाखको जुइनो खुस्के छ । सिट चाहिँ कांग्रेसले १७ प्रतिशत दिएको छ अनि उनार्कै पहिलो पार्टी बन्ने अरे ।
यो झुम्री पनि नबुझी बोल्छे । महानगर र उपमहानगरमा पो १७ प्रतिशतमा हामी मानेको अरुतिर हाम्रो एकल उठेर सतप्रतिशत नतिजा अाम्छ ।
होइन हौ काका ! यो गाममा पनि तिमी एकजना छौ उठेर जित्छौ त ! माधवले गाउँपालिकामा पनि केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गर्दिनु पर्यो भनेर हाम्रो देउवा दाइसँग विन्ती बिसाएछन् । देउवा दाइले भन्दा हुने भए भरतपुर, जनकपुर, वीरगंज, पोखरातिर कांग्रेसका विद्रोही किन उठ्थे ! अहिले माधव नेपाल र प्रचन्नले केपी अोलीलाई सतोसराप गर्नमै समय विताउदैछन् । महान काम्रेड प्रचन्न `छोरीलाई जसरी पनि जिताइ देउ प्रभु´ भनेर देउवाको पाउमा लमतन्न छन् । हेर काका अब १९ दिन बाँकी छ ! यही १९ दिन भित्र माअोवादी केन्द्रका २५ प्रतिशत नेता, कार्जेकर्ता एमालेतिर गै सक्छन् । कि कसो झुम्री काकी !
भिरघरेको कुरो ठिक हो । अस्ति शुक्रवार पनि माअोवादीका ठूला नेताहरू एमाले प्रवेश गरे अरे । बिचरा माधव र प्रचन्नलाई `जोत्न गाको हली हरायो, रोपाइँ नहुने भयो´ भने जस्तो भाछ । फेरि भरतपुरका कांग्रेसीजनले `छोरीलाई भोट नदिने´ भन्ने निर्णय गरेछन् । हुन पनि हो `नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद, अाँसी र घन, फुल्टिन र प्यालामा भोट हालौ´ भन्दै कुन मूर्खले भोट माग्ने ! कांग्रेसका कार्जेकर्ता त्यति नालायक छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।
बाठी नहु झुम्री ! तँलाई नलागेर हुन्छ ? काग्रेसलाई सत्तामा पुराउने हाम्रो प्रचन्न, कांग्रेसलाई सातै प्रदेशमा भागशान्ति जै नेपाल गराउने प्रचन्न, एमसिसी पास गराउने प्रचन्न, सप्पै गर्ने प्रचन्न तर मार्ने बेलामा कि अोली कि देउवा यस्तो हुन सक्तैन । अब अायो प्रचन्नको पालो ।
पहिला देउवाले एक चान्स दिदा अहिले पनि भरतपुर महानगरपालिका नानी छोरीलाई दाइजो दिए जस्तो भाछ । अब फेरि कहिकतै अरुलाई पनि दियो भने दाइजो नै हुने निश्चित भएकाले कांग्रेसले त्यो गल्ती दोहोराउदैन । प्रचन्नको चुनावी रणनीति अब काम लाग्दैन । चुनाउको बेलामा गफ चुटेर हुदैन काका ! अब हिड ! नेपाली कांग्रेसको चार तारे झन्डा बोकेर `नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद, भोट केमा रुखमा´भन्दै अगाडि अगाडि तिमी लाग । तिम्रो पछि पछि हामी अाम्छौ ।
अोइ भिरघरे ! हेर हेर उभिण्डेतिरबाट कस्को जुलुस अाम्दै छ ? मान्छे त धेरै पो कराउदै छन् त ! पक्कै एमालेकै जुलुस हुनुपर्छ ।
भिरघरे दाइले के हेर्नु बिचरा ! चुनाउ जित्ने एमालेको जुलुस देखेपछि नेपाली कांग्रेस र माअोवादीको सातो जान्छ । लु काकी हामी पनि जाम । उ पर… डांडामा सूर्य झन्डा फहरायो । हामी काकी र म गयौ जुलुसमा ।
काका ! लाल सलाम ।